सरकारलाई डा जीवन क्षेत्रीका ७ प्रश्न
२०७५ पौष २९ आइतबार ०८:५१:११ प्रकाशित
काठमाडौं - सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्सका संयोजक डा जीवन क्षेत्रीले सरकारलाई ७ वटा प्रश्न गरेका छन्। डा गोविन्द केसीले उठाएका माग र उनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको सेरोफेरोमा रहेर डा क्षेत्रीले प्रश्न राखेका हुन्।
अलायन्सका संयोजक क्षेत्रीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग ७ प्रश्नको जवाफ मागेका छन्।
यस्तो छ डा क्षेत्रीका ७ प्रश्न
सरकार, धैर्य गर, निम्न प्रश्नहरुको जवाफ देऊ
अमेरिकी व्यंग्यकार ग्रसो माक्र्सले आधुनिक मानिसका ढोंगलाई निशाना गर्दै भनेका छन्ः "मेरा सिद्धान्त यिनै हुन् । यदि तिमीलाई यी मन पर्दैनन् भने मसँग अरु सिद्धान्त छन् ।" अर्थात्, जे गर्दा जस्तो सिद्धान्त, दर्शन वा औचित्य आवश्यक हुन्छ, त्यो सिर्जना गरिहाल्ने, तिनीहरु परस्पर विरोधी नै किन नहोउन् ।
अहिले डा गोविन्द केसी नेपालमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि इलाममा सत्याग्रहरत हुनुहुन्छ । यो कति लाजमर्दो कुरा हो कि बामपन्थी पार्टीले सरकार चलाएको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बेलगाम व्यापार नगर, स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय बनाऊ भनेर कसैले ज्यानै होम्नुपर्ने? कार्ल माक्र्सबाट निर्देशित पार्टी ग्रसो माक्र्सले व्यंग्य गरेको बाटोमा हिंड्नु दुखद हो ।
२) चिकित्सा शिक्षा ऐनले अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशित गर्ने हो कि आयोगका निर्णय ऐनका प्रावधानभन्दा माथि हुने हुन्?
५) अहिले पनि यही देशको भुगोलमा त्यस्ता बस्ती छन् जहाँ जीवन जलको अभावमा मानिसको मृत्यु हुन्छ । तपाइँहरुको प्राथमिकता त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने (त्यसका लागि दुर्गमसमेतका विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क चिकित्सा विषय पढाएर परिचालन गर्ने अनि भौतिक पूर्वाधार पुर्याउने) हो कि यो क्षेत्रको व्यापार सहजीकरण मात्रै गरिरहने?
मिति: २०७५ पौष २९